आज बिहिवार १९ गते यी राशिलाई असाध्यै राम्रो यी राशिलाई ठिकै ? जन्नुहोस तपाइको आजको दिन - ramechhapkhabar.com
आज बिहिवार १९ गते यी राशिलाई असाध्यै राम्रो यी राशिलाई ठिकै ? जन्नुहोस तपाइको आजको दिन
मेष-एउटा मित्रको नराम्रो व्यवहारले तपाईंलाई अपमान महसुस हुन सक्छ। तर आफुलाई शान्त राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंलाई यसले दुःख नदेओस भन्नको लागि बरू जोगिने प्रयास गर्नुहोस्। साँझमा चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र राम्रो मुडमा राख्न सक्छ। के तपाईंले कहिल्यै अदुवा र गुलाबसँगको चकलेट सुँघ्नुभएको छ? तपाईंको प्रेमी जीवन आज त्यस्तै स्वादिलो हुनेछ। व्यापार साझेदारले सहायतापूर्ण व्यवहार गर्नेछन् र तपाईंले सँगै रहल काम पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो शरीर र व्यक्तित्व सुधार गर्ने तपाईंको प्रयासले तपाईंलाई सन्तुष्टि दिनेछ। तपाईंलाई आज लामो समय पछि आफ्नो जोडीबाट साँच्चै मायाले भरिएको र न्यानो अंगालो प्राप्त हुनेछ।
वृष-तपाईंको व्यक्तित्वले आज अत्तरको झैं काम गर्नेछ। तपाईंको निवेश र भविष्यको लक्ष्यबारे गोप्य हुनुहोस्। जोडी र छोराछोरीहरूले अतिरिक्त स्नेह र हेरविचार गर्नेछन्। कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन। बदलिंदो समयसंगै हिंड्नको लागि नयाँ प्रविधिसँग अनुकूल हुन आवश्यक हुनेछ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। तपाईंले आज आफ्नो विवाह यति सुन्दर कहिल्यै भएको थिएन भन्ने महसुस गर्नु हुनेछ।
मिथुन-कठिनाइ बुन्ने र तिनीहरूलाई बढाउने तपाईंको बानीले तपाईंको नैतिक फाइबर कमजोर हुन सक्छ। तपाईंको आकर्षण र व्यक्तित्वले केही नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। आफ्नी प्रियतमासंगको तपाईंको लापरवाह व्यवहारले घरमा परेशानी ल्याउन सक्छ। तपाईं मेहनत र धैर्य मार्फत आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नुहुनेछ। तपाईंको मुड नराम्रो भएकोले आफ्नो जोडीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ।
कर्कट -विजय समारोहहरूले पनि तपाईंलाई अत्यन्तै आनन्द दिनेछ। तपाईंले यस आनन्दलाई साथीहरूसँग आनन्दसँग बिताउन सक्नुहुन्छ। अनपेक्षित बिलले आर्थिक बोझ बढाउनेछ। तपाईं यसको लागि बाहिर जानु पर्ने भए तापनि – छोराछोरीसँग आनन्द मनाउन आफ्नो खाली समय खर्च गर्नुपर्छ। आफ्नो रोमान्टिक दृश्य प्रसारित हुन नदिनुहोस्। तपाईंको सर्वश्रेष्ठ अवसर तपाईंले भेटेका नयाँ मान्छेको माध्यमबाट प्राप्त हुनेछ। अनपेक्षित अतिथिको कारणले तपाईंको योजनामा बाधा पर्ने सक्छ, तर यसले तपाईंको दिन राम्रो हुनेछ।
शिंह -तपाईँको अरूलाई आलोचना गर्ने बानीले स्वयं केही आलोचनाको सामना गर्नु पर्ने सम्भावना छ। आफ्नो हँसीखुशीलाई माथि र प्रतिरक्षालाई तल राख्नुहोस् र यसले तपाईंलाई अप्रकट टिप्पणीबाट मुक्त हुने राम्रो अवसर दिनेछ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नको लागि सही दिन। साथी तथा आफन्तहरूलाई आफ्नो राय जबरजस्ती नथोप्नुहोस्, किनकि यो तपाईंको नहुन सक्छ र तपाईंदेखि तिनीहरू अनावश्यक रूपमा रिसाउन सक्छन्। हृदय नगुमाउनुहोस् – असफलता एकदम प्राकृतिक हो र तिनीहरू नै जीवनका सौन्दर्य हुन्। योग्य कर्मचारीहरुका लागि पदोन्नति वा मौद्रिक लाभ। आफ्नो जोडीले तपाईंको कुनै योजना वा परियोजनामा बाधा पुर्याउन सक्छ; धैर्य नगुमाउनुहोस्।
कन्या- सांझ चलचित्र-थिएटर वा आफ्नो जोडीसित खानाले तपाईंलाई तनाउमुक्त र सुन्दर मुडमा राख्नेछ। यो अवधि आफ्नो नयाँ परियोजनाहरू र योजनाको सन्दर्भमा आफ्ना आमाबाबुलाई विश्वासमा लिनका लागि राम्रो छ। अनपेक्षित रोमान्टिक झुकावले बेलुकीतिर तपाईंको मन ढाक्नेछ। कामको समयमा कसैले तपाईँको योजना बिगार्ने प्रयास गर्न सक्छ – त्यसैले तपाईंले वरिपरि के भइरहेको छ भनेर सावधान हुनु आवश्यक छ। तपाईंलाई आफ्नो वैवाहिक आनन्दको लागि एउटा अचम्मको आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
तुला-तपाईंको लागि सबै भन्दा राम्रो के हो भन्ने मात्र तपाईंलाई थाहा छ – त्यसैले बलियो र साहसी भएर र छिट्टै निर्णय लिनुहोस् र परिणामसँग बस्नुहोस्। तपाईंको आर्थिक स्थितिमा सुधार भए तापनि पैसाको खर्चले अझै पनि तपाईंका परियोजनाहरु कार्यन्वयन गर्नमा रोकावट गरिरहनेछ। तपाईंले आजको खाली समयको लाभ लिनुहोस् र परिवारका सदस्यहरुसँग प्यारो समय खर्च गर्नुहोस्। रोमान्स सुखद र अत्यधिक रोमाञ्चक हुनेछ। आज काममा सबैले इमानदारीसाथ तपाईंको कुरा सुन्नेछन्। आफ्नो बाटोमा आएका सबैलाई विनम्र र आकर्षक भइदिनुहोस् – केही चुनिन्दाहरूले मात्र तपाईंको जादूले भरिएको आकर्षणको रहस्य थाहा पाउनेछन्। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
वृश्चिक – तपाईंको आकर्षक व्यवहारले ध्यान आकर्षित गर्नेछ। केही अतिरिक्त पैसा बनाउन आफ्नो नवीन विचार प्रयोग गर्नुहोस्। साना बच्चाहरुले तपाईंलाई व्यस्त राख्नेछन् र आनन्दित गराउनेछन्। तपाईं आज आफ्नो वरिपरि सबैतिर आफ्नी प्रियतमाको प्रेम महसुस गर्नुहुनेछ। यो एउटा सुन्दर प्यारो दिन हो। आज तपाईंसँग शक्ति रहनेछ र आफ्नो कमाउने शक्ति कसरी जुटाउने भन्ने थाहा हुनेछ। छुने, चुम्बन, अंकमाल आदि कुराको वैवाहिक जीवनमा विशेष महत्त्व छ। तपाईंले यसलाई आज अनुभव गर्नु हुनेछ।
धनु -तपाईंलाई आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधार गर्ने कामहरूको लागि प्रशस्त समय हुनेछ। तपाईंको कार्डमा धार्मिक स्थल वा आफन्तको घरमा भ्रमण गर्ने सम्भावना देखिन्छ। अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुनाले वा धनको वर्षा हुनाले व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। आज मान्छेहरूले तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् – जुन तपाईंले सधैं सुन्न चाहनु हुन्थ्यो। लामो समय पछि, तपाईं र तपाईंको जोडीले कुनै झगडा र तर्क बिना केवल प्रेम साथ शान्तिमय दिन बिताउनु हुनेछ।
मकर-तपाईंको तेज कार्यले तपाईंलाई उत्प्रेरित गर्नेछ। सफलता हासिल गर्न – समयसँग आफ्नो विचार परिवर्तन गर्नुहोस्। यसले तपाईंको दृष्टि फराकिलो पार्नेछ – क्षितिज बढाउनेछ – तपाईंको व्यक्तित्वमा सुधार गर्नेछ र मन समृद्ध बनाउनेछ। मित्र र नजिकैका व्यक्तिहरूले तपाईंलाई सहयोग गर्नेछन्। आज तपाईं मुटु फुट्नबाट बच्नुहुनेछ। रिटेलर र थोक व्यापारीहरूको लागि राम्रो दिन। आज तपाईंले आफ्नो मनको जाँच गर्नु हुनेछ – तपाईंहरू कसैले चेस-क्रोसवर्ड खेल्न लाग्नुहुनेछ भने कसैले कथा-कविता लेख्नु हुनेछ वा भविष्यको बारेमा केही योजना बनाउनुहुनेछ। आफ्नो जोडीसित तपाईं आज फेरि प्रेम गर्नुहुनेछ किनकि उनी यसको लागि योग्य छन्।
कुंभ-“आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ।” परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईंले उनीहरूलाई ध्यान दिनुहुँदैछ भन्ने महसुस गराउन उनीहरूको आनन्द र दुःखमा आफैलाई संलग्न गराउनुहोस्। आज तपाईंले आफ्ना साथीको अनुपस्थितिमा उनको खुशबू महसुस गर्नु हुनेछ। कठिन समयमा आफ्ना जीवनसाथीबाट सहायताको कमीले तपाईंमा निराशा आउनेछ।
मीन- तपाईंलाई ढाक्ने र तपाईंको प्रगतिमा बाधा गर्ने दुःखलाई टाढा फ्याँकिदिनुहोस्। विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस – कसैले तपाईंलाई धेरै नजिकबाट हेरिरहेको छ र तपाईंलाई विशेष व्यक्ति ठान्दछ – प्रशंसनीय कामहरू मात्र गर्नुहोस् जसले तपाईंको प्रतिष्ठालाई अझै उठाउन सक्छ। प्रेममा मग्न भएकाहरूले प्रेमको संगीत सबै समय सुन्दछन्। आज तपाईंले यो संसारका सबै गीतहरू भूल्ने त्यो संगीत सुन्नु हुनेछ। तपाईंको नयाँ योजना र उद्यमको बारेमा भागीदारहरू उत्साहित हुनेछन्। आज तपाईंले आफ्नो जीवनसाथीसँग हुँदा कस्तो महसुस गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउनु हुनेछ। हो, तपाईंको जोडी त्यो जीवनसाथी हो।